Mariin Dhimma Sudaan Kibbaa Milkaa’eera Jenna: Dubbi Himaa Ministrii Dhimma Alaa Itiyoophiyaa
Kan Finfinnee keessatti geggeessamaa ture wal ga’iin 63ffaan addaa sudaan kibbaa irratti fuuleffate kan hoogganoota IGAD kaleessa galgala xumurmee jira.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahimed illee adda durummaa dhaan irratti hirmaataniiru.
Waltajjii akkasii irratti ennaa hirmaatan illee jalqaba isaanii ti. Hoogganoonni biyyoota adda addaa kanneen wal ga’ii sana irratti hirmaatan illee baga nagaan dhuftan jechuun simannaa godhaniifii jiru.
Dubbi himaan ministrii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Melles Alem kaayyoon wal ga’ii Sanaa maal akka ta’e waahila keenya Hoonookiif ibsanii jiru.
Wal ga’iin kun adda durummaa dhaan kan irratti mari’ate dhimma nageenya Sudaan Kibbaa irratti. Humnoota siyaasaa Sudaan Kibbaa gidduu waggoota shanan darbaniif wal ga’ii takka hoo’ee qabbanaa’utu geggeeffamaa ture. Finfinnee irratti walii galtee nageenyaa bifa haaraa dhaan hojii irra oolchuuf mallatteessanii walii galtee lola dhaabuu irra erga ga’amee dhiiga dangalaasuun akka dhaabatu jaarsummaa fi keessummeessuu Itiyoophiyaatiin falmii cimaan geggeessamaa ture. Kaleessas wal ga’ii ministeerotaa irratti mariin geggeessame ba’iin isaa hoogganoota IGADf dhiyaateera jedhan obbo Melles. Gabaasi sun maal irratti akka fuuleffate illee ibsanii.
Gabaasi kun dhimmoota ijoo lama irratti fuuleffate jechuun hin danda’ama. Gama Sudaan Kibbaatiin yaada furmaataa kan jedhame hoogganootaaf dhiyaateera.
Lammaffaan immoo dhimmi nageenyaas ilaalameera.
Gama bulchiinsaatiin ijoo kanneen jedhaman, itti aanaa prezidaantiin meeqa haa jiraatu? Eenyu bakka kam haa qabatu? Barcummi Kaabinee meeqa haa ta’u? itti aantoti ministeerotaa meeqa haa ta’an? Barcumni paarlaamaa Sudaan Kibbaa aattamiin haa hirmaatamu? Eenyu barcuma meeqa haa qabaatu kan jedhuuf kutaaleen Sudaan kibbaa bulchiinsa akkamii haa qabaatu kan jedhu irratti komiishinni tokko akka hundaa’uu fi murtaa’u irratti walii galameera.
Arjentiinaan hin dandamanne 3-0 qaarisan,Masrii,Morookoo fi Peerullee ya itti fa'anii galchan korommiin kubbaa miilaa waluma dhahuutti jirti